घनश्याम, योगेश र रामकुमारीको रुवाबासी ! - Nagarik Medi
किन रोए उनीहरू ?
२०७८ भाद्र १५, मंगलबार मा प्रकाशित ९ महिना अघि
काठमाडौं – पटक-पटक विभाजनको चोट व्यहोर्दै आएको नेकपा (एमाले) फेरि टुक्रिएको छ । विभाजनले दुवैतिरका नेताकार्यकर्ताको मुहारमा न खुसी छ नत उत्साह नै । एमाले विभाजनपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समावादी) गठन गरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि भएका दुवै पार्टीका नेताहरूबीचको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा नेताहरूबीच सैद्धान्तिक र कार्यदिशाको बहस भएको छैन । छ त केवल एकआपसमा चित्त दुखाइ र आँसु खसाल्ने काममात्र । दुःख र आँशुका केही प्रसंग यस्ता छन् ।
अनि रोइन् रामकुमारी झाँक्री
माधव नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठनका बेला निर्वाचन आयोगमा रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपालको हात समातेको विषय सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चा भयो । कतिपयले नेपाललाई झाँक्रीले पार्टी फुटाउन लतारेरै लगिन् भन्नेसम्मका टिप्पणी गरे । तर, झाँक्रीको अन्तरमन भने फुटबाट पटक्कै खुसी छैन ।
अखिलका नेतामाझ झरेको घनश्याम र योगेशको आँसुु
भट्टराईले नेपालको साथ किन छोड्नपर्‍यो भनेर बताइरहँदा प्रसंग झिके चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका नेता टंक कार्कीको । नेपालले भूमिगतकालमा कार्कीलाई १० वर्षभन्दा बढी समय कसरी भूमिकाविहीन बनाए भनेर बेलीविस्तार लगाए, योगेशले । र, उनले कार्कीजस्ता थुप्रै नेताको प्रसंग निकाल्दै निस्कर्ष सुनाए- यसरी नै अन्याय गर्छन् माधवले, त्यहीँ भएरसँगै बस्न सकिएन ।
भुसालले सैद्धान्तिक विषय उठान गर्दै नेपालसँगको सहकार्य टुट्नमा आफ्नो अन्तिमसम्मको कसरत फेल भएको र रोएर छुट्टिनुपरेको बताए । उनको भाषणको बीचैमा उठिन् अखिलकी पूर्वउपाध्यक्ष भक्तकुमारी लामा । लामाको प्रश्न थियो, ‘भोलि केपी ओलीसँग फेरि रोएर छुट्टिनुपर्ने दिन आयो भने के गर्ने कमरेड?’ भेलामा सहभागी अखिलका एक नेताकाअनुसार भुसालले यसको स्पष्ट जवाफ त दिएनन् । तर, पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुको विकल्प अब नरहेको सुनाए ।
हतास भएका नेताहरूले नेपालकै अघि आँसु खसाल्दै अब धेरै विवाद नगरौँ भने तर नेपालले अडान छाडेनन् । अन्ततः पार्टी विभाजन भएरै छाड्यो । ती नेताकाअनुसार नेपाल निवासमा सबैभन्दा बढी चित्त दुखाएर आँसु झार्ने नेता भने गोकर्ण थिए । -न्युज कारखाना